IZITHOMBE: Bekunje emcimbini iWine Wednesday Picnic eThekwini | News24
eThekwini - Baphume ngobuningi babo abathandi bobumnandi kwehlule ngisho isimo sezulu singesihle kahle kodwa baphikelela khona emcimbi iWine Wednesday Picnic.
Lo mcimbi ububanjelwe eWhirling Wheels Club, eCobham Grove e-Windermere eduzane kwenkundla yezemidlalo i-Moses Mabhida Stadium.
Yize bekungokokuqala kubanjwa lo mcimbi, abahleli bawo bathi uzophindwa njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu.
Ngokusho komhleli walo mcimbi odume ngelikaDogg DBN, isu lokwenza lo mcimbi lisuselwe kuleyo evame ukwenziwa njalo ngoLwesithathu endaweni yokucima ukoma i-Zorka Lounge esemgaqweni wodumo uFlorida Road.
EZorka lo mcimbi usuke wenzelwe ukuheha abesimame nokukhuthaza ukuba bazithande ngoba kuyaye kube nomgomo wokuthi akangeni owesimame ongawagqokile amaxhumela.
OLUNYE UDABA: UMinnie Dlamini uthi akanandaba nabathi usekhuluphele
Yize kunjalo, ziba khona izifundo ezinhle ezifundiswa abantu abahambele lo mcimbi ngoba kuyaye kube nezingxoxo ngokuziphatha, ukugwema ukuthandana namadoda amadala, ukukhuthaza kokusetshenziswa kwamakhondomu nokunye.
Njengoba lo mcimbi usuwenziwe wamkhulu futhi wenzelwa nasendaweni evulekile, bekufike abantu abaningi bezozibonela ngawabo ukuthi bekwenziwani.
Bekumenywe nentokazi eyintandokazi kumabonakude uBoity Thulo ukuba yingxenye yalo mcimbi njengoba efike wakhangisa nangemikhiqizo yakhe.
UDogg uthe ujabule kakhulu ngendlela obekugcwele ngayo futhi wathembisa okufanayo nangokuzayo.
Abantu balithokozele ngezindlela eziningi iholidi lamalungelo abantu, bekunje eThekwini emcimbini we-Wine Wednesday Picnic pic.twitter.com/mzeyYmSJ2A
— isiZulu.news24.com (@IzindabaNews24) March 22, 2018